လာမယ့် (၂၀၃၀) တွင် စစ်တပ်ကရေငုပ် သ င်္ဘော အုပ်စုပိုင်ဆိုင်ရန်ရည်မှန်းထားကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ပြော | CNA-Asia
January 24, 2020 By admin Daily News
လာမည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရေငုပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစ်စု ပိုင်ဆိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း တပ်မတော်က ပြောသည်။ ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သော တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
တ ပ်မတော်(လေ)တွင် ၂၀၂၉ ခုနှစ် ၌ ဘာဖြစ်ရမည်ဟူသော ရည်မှန်းချက်ရှိကြောင်း၊ အလားတူ တပ်မတော်(ရေ)တွင်လည်း ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ရေငုပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစ်စုပိုင်ဆိုင်ရမည်ဟူသော ရည်မှန်းချက်ရှိကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြော သ ည်။
ယင်းအတွက် ယခု မြန်မာ့တပ်မတော်က ဝယ်ယူထားသော ရေငုပ်သင်္ဘော တစ်စီးဖြင့် စတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်း ကပြော သ ည်။
“သူ့မှာ ရေငုပ်သင်္ဘောရှိတယ် ဆိုတဲ့ deterrence power ။ deterrence power ဆိုတာ စစ်တိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ ရရှိတဲ့ ရိုသေမှု ခန့်ညားမှု။ ဒါပဲ” ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ်က ဆို သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ခေတ်တွင် ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ် မေယုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ကော်ဗက်စစ်ရေယာဉ်အနော်ရထာကို တည်ဆောက်၍ တပ်တော်ဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးယနေ့တွင် ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ် (၅) စီးပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်း ရှင်းပြချက် အရ သိ ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော တပ်မတော်(ရေ) နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် အသစ်ဝယ်ယူထားသော ဘက်စုံသုံးစစ်ရေယာဉ် မုတ္တမ ကို တပ်မတော်ဝင်ခဲ့သော်လည်း ဝယ်ယူထားသောရေငုပ်သင်္ဘောကိုမူ တပ်တော်မ ဝင် ခဲ့ပေ။
ရေငုပ်သင်္ဘောတပ်တော်ဝင်ခြင်းအခမ်းအနားကို သီးသန့်ပြုလုပ်မည်ဟုလည်း တပ်မတော်က ပြောကြား ထားသည်။
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်းပင်ကို ငယ်ငယ်က သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးပေးခဲ့ဘူးတဲ့ သင်ခန်းစာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ရက်လျှင် ဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ ၃၈ သန်း ထွက်ရှိနိုင်မည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့သိုက်တစ်ခု တွေ့ရှိထား
(၂၀၂၀) စင်ကာပူနိုင်ငံလေကြောင်းပြပွဲကို ဖဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့
တူရကီကြည်းတပ်က ရ ဒသမ ၆၂ စက်သေနတ်တပ်ဆင်ထားသောဒရုန်းများကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့အဖြစ် စတင်အသုံးပြု
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားသည့်ဒေသများတွင် အသုံးပြုနေသည့် ယွမ်ငွေစက္ကူ များကို ဖျက်ဆီးသွားမည်ဟု တရုတ်ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာခဲ့
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အတွက် ထိရောက်သည့် ကုသဆေး ရှာတွေ့ပြီဟု တရုတ် ကြေညာ
အက်စ်-၅၀၀ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်က အမေရိကန်ထုတ် အက်ဖ်-၃၅ ကိုပစ်ချနိုင်သည်ဟု ရုရှားပြော
အာဒါလွတ်ဥ နှင့်ပတ်သက်သော လူတွေသိပ်မသိသေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ…
အိန္ဒိယက ကီလိုရေငုပ်သင်္ဘောဟောင်းတစ်စီး မြန်မာဆီ လွှဲပေးမယ့်အပေါ် အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးရဲ့အမြင်
သင်္ဘော ဖျက် ခရုဇ်ဒုံးလက်နက်စနစ်သစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ ယူကရိန်း
အက်ဖ်-၂၁ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် အမေရိကန်နှင့်အိန္ဒိယတို့အကြားသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
အမေရိကန်လုပ် ကေစီ-၁၃၀ ဂျေ ဝေဟင်ဆီဖြည့်လေယာဉ်များလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်လေတပ်ဖွဲ့
မင်းပြားမြို့နယ် ဖားပြိုရွာအား အေအေ အဖွဲ့မှ အကာအကွယ်ယူတိုက်ခိုက်နေ၍ ရွာသားများပိတ်မိနေ
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ပြည်သူလူထုမပါဘဲ ဆောင်ရွက်၍ မရကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
ပထမဆုံး လူမျောက် မျိုးစပ် ကပြားမျိုးနွယ်အသစ်ကို တရုတ်နိုင်ငံက စမ်းသပ် အောင်မြင်ခဲ့
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တရုတ်ရဲ့ လက်နက်ရောင်းချမှု့စျေးကွက်ကိုပါ ရိုက်ခတ် မည်လော
အာရပ်ကမ္ဘာကို အကြီးအကျယ် သိက္ခာ ကျစေခဲ့တဲ့ အစ္စရေးရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ၆ ရက်စစ်ပွဲအကြောင်း
တပ်မတော်သားများ ခြင်းတောင်းအသုံးပြုရသည့် အကြောင်းအရင်း
မန္တလေးမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အင်ဖာမြို့သို့ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း၍ တိုက်ရိုက်ဘတ်စ်ကားလိုင်း လာမည့်ဧပြီလတွင် စမ်းသပ်ပြေးဆွဲမည်
ဝူဟန်မှပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာသည့် မြန်မာကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ အိမ်မပြန်ကြမီ နှုတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်
လူသားတွေအမျိုးတုံးနိုင်တဲ့ အထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဇီဝလက်နက်ဆိုတာ
ရခိုင် မင်းပြားတွင် တပ်မတော် နှင့် အေအေ တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဟာ ရုရှားနဲ့ တရုတ်ကို ဆန် ့ကျင်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဇီဝ စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ကြောင်းပြော
14 ရက်ပြည့်လို့အိမ်မပြန်ခင် ဝူဟန်ပြန်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ရေးတဲ့စာ
သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
“နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ နာဇီအကျဉ်းစခန်းမှ မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ သရဲများ”
အောင်လအန်ဆန်း ပွဲကြည့်ချင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းကောင်း
အီရန်ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေကို တုန့်ပြန်ဖို့ အစ္စရေးသုံးလာနိုင်တဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော် အက်ဖ်-၃၅ လေယဉ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဗိုင်းရပ်စ်ကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါက ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါး ကူးစက်ခံရနိုင်တယ်လို့ပြောပီ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အရာရှိကို သေနတ်စာကျွှေးခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအဖွဲ့
မြန်မာ-ဘီလာရုစ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်ဖို့ဆွေးနွေး
Airbus_အိတ်22M ရဟတ်ယာဉ်များကို ဝယ်ယူတော့မည့်အိန္ဒိယ
တပ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက် လွှဲပြောင်းမည်ဟု ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ် အပီရတ်ခွန်ဆမ်ပွန် ပြောကြား
ဆိုလေမာနီ နည်းတူ ကင်ဂျုံအန်လည်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရနိုင်သလား?
တိရိစ္ဆာန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် ကျောက်ရုပ်ဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်ရေအိုင်ကြီး
တတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် စတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နေရာငါးခု
ဆိုလေမာနီကို သုတ်သင်မှုအတွက် အမေရိကန် ဘာတွေပေးဆပ်ခဲ့ရပြီလဲ…
ဆီးရီးယား Mi 17 ရဟတ်ယာဉ်ကို တူရကီက အက်(ဖ်)-16 ဖြင့် ပစ်ချခဲ့ ဟုဆို
စိန်မင်းသမီး ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးပေါ်ဝယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သင့်သူ ၃၉ ဦးထပ်မံစစ်ဆေးတွေ့ရှိ (စုစုပေါင်း ၁၇၄ ဦးထိရှိလာ)
အမေရိကန်-မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တွင် မှောင်ခိုလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သည့် အရှည်လျားဆုံး ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွေ့ရှိ
အမေရိကန်နဲ့ အဓိက စစ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို ဖိလစ်ပိုင် ဖက်က ဖျက်သိမ်း
ရှုံးပွဲမရှိ နယ်သာလန်ဖိုက်တာရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ကို ပထမဆုံးတည်ဆောက်
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်တွင် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး စွန့်ပစ်ခံရ
သမ္မတဟောင်း ဘာရှီးရားကို အိုင်စီစီ ခုံရုံးသို့လွှဲပေးရန် ဆူဒန်အစိုးရသဘောတူ
ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များဝယ်ယူရန် သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် အမေရိကန်နှင့် ပိုလန်….
စစ်သားတစ်ဦးရဲ့ ရမ်းကားပစ်ခတ်မှုကို ထိုင်းစစ်တပ် အကြီးအကဲကိုယ်တိုင် တောင်းပန်…..